के खान भने ग्रस्त हाइपोग्लाइसीमिया?-मधुमेह वार्ता-Sinocare
Hypoglycemia पीडित छ भने के खान?
समय: 2019-10-24 हिट्स: 63
हामीले खानेकुरा छनौट गर्दा रगतमा चिनी बढाउन छनौट गर्नुपर्दछ hypoglycemia? बिभिन्न खानाको ग्लाइसेमिक इन्डेक्स फरक हुन्छ। उच्च ग्लाइसेमिक सूचकांकको साथ खानाले रगतमा चिनी छिटो माथि जान्छ। ती मध्ये सब भन्दा उच्च ग्लूकोज हो (ग्लाइसेमिक इन्डेक्स १०० हो), सेतो रोटी () 100), मह (88 73), सोडा क्र्याकर ()२), सेतो चिनी (72 65), बाजरा कोन्जी (62२), सुन्तलाको जुस (57 49) ), चकलेट ())), स्याउ जुस (41१) र कोका कोला ()०)।
जब हाईपोग्लाइसीमिया ग्रस्त हुन्छ, हामी केवल धेरै बोसो वा प्रोटीन (जस्तै आइसक्रिम) भएको खाना खान गर्दैनौं। किनभने बोसोले ग्यास्ट्रिक खाली गर्न र कम कार्बोहाइड्रेट्सको भूमिकालाई कम गर्न सक्दछ, जसले रगतमा चिनी छोटो समयमा चाँडो बढ्न सक्दैन, तर हाइपोग्लाइसीमिया उत्तेजनाले बिरामीहरूलाई बढी खाना खान जारी राख्दछ, रगत ग्लुकोजको गाह्रो नियन्त्रणको परिणामस्वरूप।
यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ यदि बिरामीहरूको हाइपोग्लाइसेमिक औषधि समावेश गर्दछ α- ग्लुकोसिडेस अवरोधकर्ता (जस्तै एकब्रोज, बेसेन, इत्यादि), तिनीहरू सेतो चिनी पानी, फलफूलको रस, बिस्कुट, स्टीम्ड बन र अन्य पदार्थहरू डिसकेराइडहरू वा स्टार्चिनका साथ जोड्दैनन्। किनकि यी औषधीहरूले कार्बोहाइड्रेटलाई ग्लुकोजमा रोक्न सक्छन्, र चाँडै ग्लुकोपेनिया उपचार गर्न सक्दैनन्। त्यसो भएपछि बिरामी α- ग्लुकोसीडस अवरोधकले ग्लुकोज ट्याब्लेट वा ग्लुकोज पानी छान्नु पर्छ जब हाइपोग्लाइसीमिया देखा पर्दछ।
जब मधुमेह बिरामीहरूको रगत ग्लूकोज हुन्छ ≤3.9 मिमी / एल, तिनीहरूले ग्लुकोज वा चिनी युक्त खाना थप्न आवश्यक छ। गम्भीर हाइपोग्लाइसीमियाले जागरूकता र रगत ग्लूकोज स्थिति अनुसार उचित उपचार गर्नुपर्छ। जब रगत चिनी हुन्छ ≤3.9 मिमी / एल, यदि उसको सचेतना स्पष्ट छ भने उसले १ he-२० ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिन सक्छ (ग्लूकोज मनपर्दछ); रगत चिनी मापन गर्न १ minutes मिनेट प्रतिक्षा गर्नुहोस्, यदि रगत चिनी अझै छ भने≤3.9। यदि बिरामीहरूलाई चेतना गडबडी छ भने हामीले इमरजेंसी फोनमा अस्पतालमा उपचारको लागि कल गर्नुपर्नेछ। कार्बोहाइड्रेट को १ grams ग्राम निम्न खाद्य पदार्थहरुमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ: १uc ग्राम ग्लुकोज (वा उही मात्रामा सेतो चिनी, खैरो चिनी), २० ग्राम मह, सुन्तलाको रस सोडा को २०० मिली, वा कोला को समान मात्रा, निम्बू पानी ), Orange० ग्राम सुन्तलाको रस, २ grams ग्राम रोटी (२/15 टुक्रा टुक्रा रोटी), २० ग्राम बिस्कुट (pieces टुक्रा सोडा क्र्याकरहरू) र यस्तै।
अघिल्लो पृष्ठ: हामीले खेलमा कुन कुरामा ध्यान दिनु पर्छ?
अर्को पाना : जब उपवास रगत ग्लूकोज स्तर सामान्य भन्दा कम हो ...